Ihe 13 Kacha ewu ewu B2B Usoro Nlekọta | Martech Zone
Nke a bụ ihe na-akpali infographic na m chọrọ ịkọrọ site Wolfgang Jaegel. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-enye nghọta n'ime atụmatụ azịza ọdịnaya nke ndị ahịa B2B na-etinye, mana n'ihi ọdịiche m na-ahụ na ihe a na-etinye ọdịnaya yana mmetụta nke atụmatụ ndị ahụ nwere ike ịbụ. N'ihe banyere ewu ewu, ndepụta a bụ mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụkọ dị na weebụsaịtị gị, akwụkwọ akụkọ, blọọgụ, ihe omume nke mmadụ, ọmụmụ ihe, vidiyo, isiokwu na weebụsaịtị ndị ọzọ, akwụkwọ akụkọ ọcha, na ntanetị.
87% nke ndị na-azụ B2B na-ekwu ọdịnaya nwere mmetụta na nhọrọ ịhọrọ.
N'uche m, na-enweghị ihe akaebe ọ bụla, echere m na ndị na-ere ahịa B2B nwere ike na-efu n'ezie. Ọ bụ ezie na m kwenyere na akwụkwọ akụkọ na ọdịnaya dị mkpa na saịtị gị dịka blọọgụ na isiokwu dị mma maka ịdọta okporo ụzọ, ọdịiche nke enweghị nkwupụta, akwụkwọ akụkọ na vidiyo yiri ka ọ na-emegide usoro B2B nke oge a. Ka emechara, dị nnọọ na-ọbịa azụ gị website bụ nanị otu nsogbu… ma nnukwu na-na-ha ka ha tọghata mgbe ha na-na na na saịtị. Ndị ahịa anyị ahụla nsonaazụ dị egwu site na nkwupụta ezigara site na mgbasa ozi mmekọrịta, akwụkwọ akụkọ n'azụ akwụkwọ ndebanye aha, yana ọmụmụ ihe iji nye usoro mkpebi ịzụta. Ọ dị m ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ na nnweta ma ọ bụghị akụkụ ntụgharị nke akụkụ ebe a!
Tags: ahịa ahịaisiokwub2bahịa b2bBlọọgụikpe ọmụmụakwụ ụgwọ mgbasa oziiheMgbakọ Ahịaakwụkwọ akụkọihe ngosi ntanetịakwụ ụgwọ mgbasa oziihe ngosiChọọ Marketingelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingahịa vidiyovideos